Frequently Asked Questions | ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာ ဘိဝံသ
အမေး (၆၆) ဦးဝင်းမြတ် (wynnmyat12@gmail.com)
တပည့်တော်သည် တိုင်းရင်းဆေးဆရာဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ဓာတ်လေးပါးတို့ကို ဆက်စပ်မှုတွင် အာကာသဓာတ် အရေးပါပုံကို သိလိုပါသည်ဘုရား။ လူခန္ဓာကိုယ်တွင် ဓာတ်လေးပါး ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် စာအရ သဘောတရားမျှ ဖြစ်ပါသလား ? နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဓာတ်လေးပါးဖြစ်ခြင်း ထင်ပါသောကြောင့် western medicine အရ ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခြင်းကို ဒေသနာအရ သမုဒ်ဌာန်းလေးပါးနှင့် ဓာတ်လေးပါးကြားတွင် အာကာသဓာတ်က အရင်ဖောက်ပြန်ပြီးမှ အခြားဓာတ်လေးပါး ပျက်စီးတတ်ပါသလားကို ခြေတော်ဦးခိုက် လျှောက်ထား အပ်ပါသည်ဘုရား။
(၆၆) ဦးဝင်းမြတ် ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အာယုဗ္ဗေဒနှင့် ဗိန္ဓောဆေးကျမ်းများကို မလေ့လာဘူး၍ ဆေးပညာအရ အာကာသဓာတ်အကြောင်း မသိပါ။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအရ အာကာသဓာတ်ဆိုသည်မှာ ရုပ်ကလာပ် ၂ခု ကို အပိုင်းအခြားပြုသော အရာကို (ပရိစ္ဆေဒရုပ်)ခေါ်သည်။ ရုပ်ကလာပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်သာ “ရုပ်”ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်၏။ ရုပ်အစစ် မဟုတ်။ ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိ ရူပကဏ္ဍ၌ “အာကာသဓာတ်ရုပ်ဆိုသည်မှာ မဟာဘုတ် ၄ ပါးတို့နှင့် ထိစပ်မှုမရှိခြင်း သဘာဝပင်ဖြစ်သည်”ဟုဆိုသည်။ သို့ဖြစ်၍ အာကာသဓာတ်သည် ရုပ်ကလာပ်တို့၏ အပိုင်းအခြားမျှသာဖြစ်၏။ သည်ထက်ပို၍ အရေး မပါ။ ဓာတ်လေးပါးဖောက်ပြန်သည်ဆိုခြင်းမှာ သဘာဝချင်းမတူသည့် ဓာတ်၎ပါးတို့၏ အချိုးအစားမညီဘဲ လွန်ကဲခြင်း ယုတ်လျော့ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌ ပထဝီဓာတ်ပျက်လျှင် က|မုခမြွေအကိုက်ခံရသူလို တကိုယ်လုံးတောင့်တင်းနေတတ်သည်။ အာပေါဓာတ်ပျက်လျှင် ပူတိမုခမြွေ အကိုက်ခံရသူလို တကိုယ်လုံးပုတ်၏ တေဇောဓာတ်ပျက်လျှင် အဂ္ဂိမုခမြွေအကိုက်ခံရသူလို တကိုယ်လုံး ပူ လောင်၏။ ဝါယောဓာတ်ပျက်လျှင် သတ္တမုခမြွေ အကိုက်ခံရသူလို တကိုယ်လုံး အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်၏ဟု အ|သာလိနိမှာဆိုသည်။ အချုပ်မှာ အာကာသဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြီးမှ ဓာတ်၎ပါးဖောက်ပြန်သည်မဟုတ်၊ ဓာတ် ၄ ပါး ကသာ မူရင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သင့်၏။
အမေး (၆၅) သက်ဝေဇော် (thetwz81@gmail.com)
(၆၅) သက်ဝေဇော် ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် နှလုံးသွေး၌တည်၏။ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို မှီ၍ အရေးကြီးသောစိတ်များ (မနောဓာတ်,မနောဝိညာဏဓာတ်) ဖြစ်ကြရ၏။ သွေးသည် ရုပ်နာမ်တွေ အသက်ရှင်ဖို့ အရေးကြီးသော အရာ ဖြစ်၏။ သွေးလှူခြင်းသည် အသက်ကိုပေးလှူခြင်းဖြစ်၍ ကြီးမားသော အာယုဒါန (ဇီဝိတဒါန)ဖြစ်၏။ Reaction အရ ဖြစ်လေရာရာဘဝမှာ ကျန်းမာခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း အကျိုးကို ရနိုင်သည်ဟု မှတ်သင့်၏။
အမေး (၆၄) မောင်ကျော်သူအောင် (ygn.sayarkyaw@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်မေးချင်တာလေးကို လျှောက်ထားပါရစေဘုရား။ တပည့်တော်တို့ လူ တွေမှာ စိတ်ကို အဓိကထိန်းချုပ်ထားတာဟာ အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေပြောတော့ ဦးနှောက်က အဓိကလို့ ပြောပါတယ်ဘုရား။တပည့်တော်တို့ဘုရားကကျတော့ ဟဒယနှလုံးလို့ သိပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် သိထား တာကတော့ ဟဒယဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားက တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီလိုမျိုး နှစ်ခု ဟာ တပည့်တော်ကို ၀ိစိကိစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်ကို သနားသောအားဖြင့် နားလည်အောင်ရှင်း ပြပါဘုရား။
“စိတ်ကိုအဓိကထိန်းချုပ်တာဟာ အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေပြောတော့ ဦးနှောက်ကအဓိကလို့ပြောပါ တယ်”စတဲ့မေးခွန်းမှာ စိတ်ဖြစ်မှုကို မေးခြင်းဟုထင်သည်။သို့မဟုတ်လျှင် စိတ်ကို အဓိကထိန်းချုပ်တာဟာ “သတိ”လို့သာဟုဖြေရမည်။
စိတ်၏မှီရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသားကို ကွဲပြားစွာ သိလိုသည်ဟု ထင်သည်။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ ဓမ္မင်္သဏီကျမ်း၌ “ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်”အကြောင်းမပါပါ။ သို့သော် ပဌာန်းကျမ်း၌မူ “ယံရူပံ”(အကြင်ရုပ်)ဟု၎င်း ၀တ္ထုခန္ဓာနံ- ၌ “၀တ္ထု (မှီရာရုပ်)” ဟု၎င်း ညွန်းဆိုထားသည်။ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်မဂ်အ|ကထာ နောက်ပေါ်ကျမ်းများ၌မူ “ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်”ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြကြ၏။
ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်သည် လူ့ခန္ဓာတွင် မည်သည့်နေရာမှာရှိသနည်း? နှလုံးသားအတွင်း တစ်လက်ဖက်ခန့်ရှိ သွေး၌ တည်ရှိသည်ဟုဆို၏။ နှလုံးသားကို ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်ခေါ်သည်မဟုတ်၊ နှလုံးသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေး လည်ပတ်မှု ဖြစ်စေသည့် အင်္ဂါရပ်ဖြစ်၏။
စိတ်ဖြစ်မှုအတွက် အကြောင်းများစွာရှိသည့်အနက် ဦးနှောက်အဓိကလား နှလုံးအဓိကလားဟု စဉ်းစားကြ၏။ ဦးနှောက် ၊ နှလုံး ၂ ခုလုံးကောင်းမှဟန်ချက်ညီညီ အလုပ်လုပ်မှ စိတ်ပီပြင်စွာဖြစ်မည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓအလို ဦး‌နှောက်ဟုလည်းမပြော၊ နှလုံးဟုလည်းမပြော ၊ ဓာတ်၏မှီရာရုပ် (၀တ္ထု) ဟုသာပြော သဖြင့် ၂ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်ဟုဆိုနိုင်၏။ ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားသည့် “အဘိဓမ္မာ မြတ်ဒေသနာ”မှ ဟဒယ ၀တ္ထအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
အမေး (၆၃) Lin Lin (tinlinhtay@googlemail.com)
Deeply respect to Saya Daw.
I was thinking about this too much whether I should ask this or not. If mankind/human being fall in love with same sex , is that sinful ? If it is sinful , why is that ? How does it apply in Buddha way ? And is that can be cured ?And in which way it can be cured ? Please explain to me Dear and respected Saya Daw.
(၆၃) Lin Lin ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
Desire for all types of sexual relation is evil (Akusala).But it is not abnormal. The desire for homosexuality and lesbianism is evil (Akusala) and as well as abnormal. The Buddha describe suchasexual relation as wrong practice (miccha-dhanma). It leads to the destruction of human world.
It is evil , because it is ultra passion . It can be cured by practising meditation on loathsome object.
အမေး (၆၂) Mg Aye Win (captain.ayewin@gmail.com)
What kind of daily activities we should do to haveasuccessful and wealthy life?
(၆၂) Mg Aye Win ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
To live inasuccessful and wealthy life you must have economics, effort and morality.
အမေး (၆၁) ဦးကြည်ဇင်
၀ိနည်းတော်နဲ့ညီ/မညီ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များသည် ဘုရားရှင်အား ရည်စူး၍ အာရုံဆွမ်း (သို့) နေ့ဆွမ်း အတွက် ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းချက်(ပေါင်းအိုးဖြင့် ထမင်းချက်ခြင်း)ခွင့်ရှိပါသလား။
(၆၁) ဦးကြည်ဇင် ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အစားအစာ ကိုယ်တိုင်ချက်ခြင်းကို သာမံပက္ကဟုခေါ်သည်။ အခြေအနေ အချိန်အခါကိုကြည့်၍ မြတ်စွာ ဘုရားက ကိုယ်တိုင်မချက်ရဟု ပညတ်သည်။ ရံခါ ကိုယ်တိုင်ချက်နိုင်သည်ဟုခွင့်ပြုသည်။ ဆွမ်းခံစား၍ရနိုင် သောနေရာတွင် ကိုယ်တိုင်မချက်ရ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကပ္ပိယရှိလျှင် ကိုယ်တိုင်မချက်ရ။ ဆွမ်း၊ ဆန် မရ သည့် နေရာဒေသမျိုးမှာ ကပ္ပိယမရှိလျှင် ကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်ရှိသည်။ အခြေအနေအရဟု မှတ်သားသင့်သည်။ ဘုရားရှင်အား ရည်စူး၍ ကိုယ်တိုင်ဆွမ်းချက်ကပ်လျှင် ဆွမ်းခံရသောနေရာ ကပ္ပိယ ရရှိသောနေရာဖြစ်ပါလျှင် ဘုရားပညတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သည်။ ဘုရားရှင်အား ရည်စူးတာ ကုသိုလ်ဖြစ်သော်လည်း တဖက်က ဘုရားစကားကို နားမထောင်ရာ ရောက်သည်။ ဆွမ်းခံ၍ရသော ဆွမ်းကို ဘုရားအားလှူဒါန်းသင့်သည်။
အမေး (၆၀) မင်းမင်းအေး (minminaye999@gmail.com)
နိဝရဏဆိုသည်မှာ စိတ်တွင် ကုသိုလ်မဖြစ်အောင် ဆို့ပိတ်တတ်သောတရားဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ နိဝရဏတရားများ ဖြစ်နေလျှင် ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်။ ကုသိုလ်စိတ်ကို ဆို့ပိတ်တတ်သောကြောင့် နိဝရဏဟု ခေါ်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို handersent ဟုဘာသာပြန်သည်။
အမေး(၅၉) မိုးသု (မန္တလေး) (khaymarnanda.1990@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကြည်လင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေဟု ဦးစွာပဏာမ မေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်ဘုရား။
ဘုရားရှင်သည် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်မထေရ်နှင့်အတူ အရူပဘုံသို့ကြွရာ ချစ်သား ချစ်သားမောဂ္ဂလန် အရူပ ဗြဟ္မာကြီးတွေ နင်းမိမှာမို့ ငါဘုရားခြေချတဲ့နေရာမှာ ခြေချဟုဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ယုံမှားသံသယ များစွာ ဖြစ်မိပါသဖြင့် လက်လှမ်းမှီရာ ပါဠိတော် အ|ကထာဋီကာတို့၌ ရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့ရှိရပါဘုရား။ သီတင်းသုံးဖော် သာမဏေကျော် အဘိဝံသဘွဲ့ရများကို လျှောက်ထားမေးမြန်းရာမှာ ၄င်းတို့ကလည်း မတွေ့ဘူး ဟုပြောကြပါသည်ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်သိလိုသည်မှာ ဒီစကားဟာ အရပ်စကားလား၊ ကျမ်းဂန်လာ စကားလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမှတ်လိုပါသဖြင့် မေတ္တာရှေ့ထား၍ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဟု ခြေတော်ဦးခိုက် ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
(၅၉) မိုးသု (မန္တလေး) ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
မြတ်စွာဘုရားသည် ရှင်မောဂ္ဂလန်နှင့်အတူ အရူပဘုံသို့ကြွသည် စသော စကားမှာ ကျမ်းဂန်လာစကား မဟုတ်၊ အကျိုးမရှိသောနေရာ မြတ်စွာဘုရားကြွလေ့မရှိ၊ ရုပ်တရားကင်းမဲ့သဖြင့် မျက်စိ၊ နား မပါသည့် အရူပ ဗြဟ္မာများနှင့် တွေ့ဆုံစရာအကြောင်းလည်းမရှိ၍ ယုတ္တိကင်းမဲ့သော စကားသာဖြစ်သည်။
အမေး (၅၈) စိုးထက် (thinkingman2011@gmail.com)
ဥပုသ်စောင့်ရာတွင် မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာတွင်နေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏ဟူသော အချက်ကို နားမလည်ဖြစ်ရပါသည်။ ဘယ်လိုနေထိုင်ရင်ပျက်ပြီး ဘယ်လိုနေထိုင်ရင် ဥပုသ်ရပါသလဲ ဘုရား။ အလုပ်လုပ် ရင်းကော ရှစ်ပါးသီလ ထိန်းနိုင်ပါသလားဘုရား။
မြင့်သောနေရာ ဆိုသည်မှာ နှစ်တောင်ထွာထက်မြင့်သောနေရာကို ဆိုလိုသည်။ မြတ်သော နေရာဆို သည်မှာ သူဌေး၊သူကြွယ်၊ မင်းစိုးရာဇာတွေအသုံးပြုသော ခမ်းနားသောအိပ်ယာ နေရာမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ ပါဋိ ဘာသာ ဥစ္စာသယနကို မြင့်သောနေရာ၊မဟာသယနကို မြတ်သောနေရာဟု မြန်မာပြန်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဥပုသ်စောင့်သုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ သာမန်နေရာမျိုး၌သာ နေသင့်သည်။ သူ‌ဌေး၊ သူကြွယ်၊ မင်းစိုး ရာဇာတွေ နေထိုင်လေ့ရှိကြသည့် ခမ်းနားကြီးကျယ်သောအိပ်ယာ နေရာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရသည်။ ရှောင်ကြဉ်ပါမည် ဆိုပြီးလျှက် မရှောင်ရင် ဥပုသ်ပျက်သည်။ သဒ္ဒါဆန္ဒ ပြင်းပြလျှင် အလုပ်လုပ်ရင်း ရှစ်ပါးသီလ ထိန်းနိုင်ပါသည်။
အမေး (၅၇) ဇော်မင်းနိုင် အမရပူရ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက် (၀၉-၄၀၂၇၂၉၄၈၉)
ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားမိပါသည်။ ဆရာတော်၏ တရားစစ်ခြင်းကို ခံယူချင်ပါသည်ဘုရား။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုဆက်ကျင့်ရမည်ကို အမိန့်ရှိစေချင်ပါတယ်ဘုရား။ အီးမေးလိပ်စာမရှိပါဘုရား။ ဝိပဿနာကို အားထုတ်နေပါသည်ဘုရား။
(၅၇) ‌ဇော်မင်းနိုင်(အမရပူရ) ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ဝိပဿနာဥာဏ်အတွက် တရားအားထုတ်လိုလျှင် အားမထုတ်မီ ဝိပဿနာရှုရမည်။ ရုပ်အကြောင်း၊ နာမ်အကြောင်း ဆရာကောင်းထံမှ သင်ယူမှတ်သားရမည်။ ဤသို့သင်ယူခြင်းကို ပညာဘူမိ အဆင့်ဟုမှတ်ရမည်။ ထို့နောက် သီလဆောက်တည်ပြီး သမာဓိထူထောင်ရမည်။ သီလနှင့်သမာဓိကို ပညာမူလဟုခေါ်သည်။ ပြီးလျှင် ပညာသရီရကို လေ့ကျင့်ရမည်။ ပညာသရီရ (ပညာကိုယ်ထည်) ဆိုသည်မှာ နာမရူပပရိစ္ဆေဒဥာဏ်မှ သင်္ခါရုပေက္ခာ ဥာဏ်အထိ ၀ိပဿနာဥာဏ်အဆင့်ဆင့်ကိုခေါ်သည်။
အမေး(၅၆) မောင်မြင့် (dram.dental@gmail.com)
တပည့်တော် မောင်အောင်မြင့် ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
EMG ကျေးဇူးဖြင့် ဆရာတော်၏ Website ကိုတွေ့မြင်ရပါသဖြင့် အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက် ကြည်နူးခြင်းဖြစ်ရပါသည်ဘုရား။
Internet မှတစ်ဆင့် သာသနာပြန့်ပွားရေးကိုဆောင်ရွက်တော်မူသကဲ့သို့
စာအုပ်များကိုလည်း အများသူငါ ၀ယ်ယူ လေ့လာနိုင်ကြစေရန်အတွက် ထာဝရရံပုံငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူကာ အရည်အသွေးကောင်းပြီး အဖိုးနှုန်းချိုသာစွာ ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့အရေးကိုလည်း လုံ့လစိုက်ပေးတော်မူပါရန် ရိုသေလေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
ဓမ္မစာပေရံပုံငွေသီးသန့် စိုက်ထူသားပြီးဖြစ်သည်။ အဖိုးနှုန်းချိုမချိုမူရင်းဖြန့်တဲ့ဈေးနဲ့ ဆိုင်တွေမှရောင်းဈေးကို ယှည်ကြည့်ပါ၊ သို့သော်စာအုပ်ဖြန့်ချိရေးမှာ ဘုန်းကြီးနှင့် မပတ်သက်ပါ၊ ဓမ္မစာပေအဖွဲ့နှင့်သာ ပတ်သက်သည်။
အမေး(၅၅) ထက်ထက် (ohn.myat@gmail.com)
မနောအကြည်ကို ဓမ္မာရုံနှင့်တိုက်တော့ မနောဝိညာဏ်ပေါ်ပါသည်။ (စိတ်ဖြစ်သွားတာ ကို ဆိုလိုတာပါလားဘုရား) မနောအကြည်က ဘယ်နေရာမှာ ရှိပါသလဲဘုရား၊ ဓမ္မာရုံကတော့ ဘဝင် စိတ်ကို ပြောတာပါလားဘုရား၊ ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။
မနောအကြည်ကို ဓမ္မာရုံနှင့်တိုက်တော့ မနောဝိညာဏ်ပေါ်ပါသည်။ ဒီစကားမှာ ဆန်းစစ်စရာ ရှိပါတယ်။ မျက်စိအကြည်၊ နားအကြည်ဟုပြောလျှင် မှန်သည်၊ မနောအကြည်ဟု ပသာဒအသုံးနဲ့ ရောသဖြင့် မှန်ကန်မှုမရှိပါ။ မနောဒွါရ(စိတ်တံခါး)ဟုသာ ပြောနိုင်သည်။ မြတ်စွာ ဘုရားက မနဉ္စ ပဋိစ္စ ဓမ္မေစ ဥပ္ပဇ္ဇတိ မနောဝိညာဏံဟုဟောသည်။ မနဆိုတာ ဘဝင်စိတ်ကို ခေါ်သည်။ အဘိဓမ္မာ၌ မနောဒွါရဟုသုံးသည်။ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း၌ မနောဒွါရံ ပန ဘဝဂ`်န္တိ ဝုစ္စတိဟု ဆိုသည်။ ဋီကာကျော်ကျမ်းက မနောဒွါရဆိုတာ ဘဝင်စိတ်အားလုံးနှင့် မဆိုင်၊ အာဝဇ္ဇန်းစိတ်၏ ရှေ့က ဘဝင်ကိုသာ မနောဒွါရဟု ဆိုသည်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးကမူ ဘဝင်စိတ်အားလုံးကိုပင် မနောဒွါရဟု ယူလိုသည်။ ဘဝင်စိတ်ဆိုတာ ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည်။ ဓမ္မာရုံဆိုတာ ပသာဒရုပ်၊ သုခုမရုပ်၊ စိတ်၊ စေတသိက်၊ နိဗ္ဗာန် ပညတ် ဤ(၆)မျိုးကိုခေါ်သည်။ စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာ ဘဝင်စိတ်လည်း ပါနိုင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ပဘဿရမိဒံ စိတံ္တဆိုတဲ့စကား ရည်ညွှန်းပြီး ပြောချင်လျှင် မနောအကြည်ဟု မသုံးဘဲ ''အဖြူထည်စိတ်''ဟုသုံးလျှင် ပသာဒအကြည်နဲ့ ရောထွေးစရာမရှိပါ။
အမေး(၅၄) ဥမ္မာ (ohn.myat@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် ငြိမ်းချမ်း ချင်ပါတယ်ဘုရား စိတ်ဖိစီးမှုတွေလဲ နည်းချင်ပါတယ်ဘုရား တပည့်တော်ကို လမ်းညွှန်ဆုံးမတော်မူပါဘုရား
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းချင်လျှင် စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရချင်လျှင် ''သတိမကွာ အသိပညာဖြင့် နေထိုင်ခြင်း''လို့ဆိုတဲ့ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်လာ သတိသမ္ပဇညအကျင့်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ။
အမေး(၅၂) မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း (loveboy.db@gmail.com)
အစွဲကိုဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲမေးရာ၌ မည်သည့်အစွဲကို ဆိုလိုသနည်း။ ဥပါဒါန်အစွဲကို ဆိုလိုသလား၊ ဥပါဒါန်အစွဲဟာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဥပါဒါန်အစွဲဟာ တဏှာစွဲ၊ ဒိဋ္ဌိစွဲဟု နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တဏှာစွဲကို ဖျောက်ချင်ရင် စွဲလန်းစရာအာရုံကို နှစ်လုံးမသွင်းပဲ နေရမည်။ သက်ရှိကိုစွဲလျှင် အသုဘ သညာဖြင့် ဖျောက်၊ သက်မဲ့အပေါ် စွဲလျှင် အနိစ္စသညာ အကြိမ်ကြိမ်ပွား၍ဖျောက်၊ ဒိဋ္ဌိစွဲဖြစ်လျှင် တရားနာ၊ အမှန်သိအောင် ကြိုးစား၊ ယောနိသော မနသိကာရဖြင့် စဉ်းစား၊ နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်၊ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်တို့ကို ရင့်သန်အောင် ဖြစ်ပွားစေပြီး ဖျောက်ပါ။
အမေး(၅ဝ) မောင်လှိုင်သိန်းထွန်း (mglingtha5050@gmail.com)
အရှင်ဘုရား လူ့လောကမှာ တစ်ချို့သောလူတွေဟာ ဒီဘဝမှာ သီလတရား မရှိကြပါဘူးဘုရား၊ သို့ပေမယ့် အဲဒီလူတွေဟာ အသက်ရှည်ကြပါတယ်၊ တစ်ချို့လူတွေဟာ ဒီဘဝမှာ သီလတရားနှင့် ပြည့်စုံကြပါတယ်ဘုရား၊ သို့ပေမယ့် တစ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အသက်တိုကြပါတယ် ဘုရား၊ အသက်ရှည်ခြင်း၏ အကြောင်းတရားဟာ သီလတရားဆိုတာ၊ အသက်တိုခြင်း၏ အကြောင်း တရားဟာ သီလမရှိလို့ဆိုတာ တပည့်တော် လက်ခံပါတယ်ဘုရား၊ ဒါပေမယ့် အတိတ်ဘဝ တုန်းက သီလတရားကင်းမဲ့တဲ့ သူဟာ ယခုဘဝမှာ သီလနှင့် ပြည့်စုံပြီး အသက်တိုတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား၊ အတိတ်ဘဝတုန်းက သီလနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူဟာ ယခုဘဝမှာ သီလမဲ့ပြီး အသက်ရှည်တဲ့သူ ဖြစ်နေ ပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော် သိလိုရင်းက အတိတ်က သီလရှိတဲ့သူဟာ ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ သီလ မဲ့တဲ့သူ ဖြစ်နေပါသလဲဘုရား၊ ထို့အတူ သီလမဲ့တဲ့သူဟာလည်း ဒီဘဝမှာ သီလတရားနှင့် ပြည့်စုံ နေပါသလဲဘုရား၊ သီလနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း သီလမဲ့ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးတော်မူပါဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရား ကျန်းမာစွာ သာသနာပြုနိုင်ပါစေ အရှင်ဘုရား။
သံသရာမှာ ဘဝပြောင်းရင် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းသည်။ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဖြစ်တတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းသို့ ရောက်ရှိခိုက် သီလနှင့်ပြည့်စုံနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်ရှိလျှင် သီလမရှိသူဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက ပတိရူပဒေသဝါသ၊ သပ္ပုရိသူပနိဿယ တို့ကို အလေးအနက်ထားဟောခြင်းဖြစ်သည်။ ဗာလနှင့်မပေါင်းဖို့၊ ပဏ္ဍိတနှင့် ပေါင်းဖို့ဆိုတာဟာ အလွန် အရေးကြီးသည်။ ဒီဘဝ သီလရှိရုံနဲ့ နောက်ဘဝ သီလရှိမယ်လို့ မမျှော်လင့်နဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံရနိုင်သည်။
အမေး(၄၉) ကိုကောင်းမြတ် (pang.peaceful@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် လက်ဆယ်ဖြာမိုး ခြေစုံဦးခိုက် ကန်တော့ပါ၏၊ တပည့်တော် မပြစ်မှားထိုက်သော အမျိုးသမီး၂ဝ-ရှိသည်ဟု ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားသော တရားတွင် နာရသော်လည်း ပြည့်စုံစွာ ဟောကြားခြင်းမရှိသဖြင့် ယခုခေတ်ကာလတွင် အထူးသိသင့် ပါသည်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ နိုင်ငံသည်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ကြားခဲ့သော နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ သလောက် ဖြစ်နေပါသည်ဘုရား၊ မြန်မာ အမျိုးကောင်းသားသမီးများနှင့် ရှေးဆိုရိုးစကားအရ ရိုးသားဖြုစင်လှသော တောသူများမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ပျက်စီးယိုယွင်းနေပါပြီဘုရား၊ ယခုခေတ်လူများအားလည်း အသိတရားကင်းမဲ့စွာ ခန္ဓာအား အရင်းအနှီးပြုလုပ်ကိုင်ခြင်း ကောင်းမွန် သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟု ထင်မြင်ယူဆ နေကြပါသည်ဘုရား၊ ထို့အတွက် ယခုခေတ်လူငယ် များနှင့် အသိပညာနည်းပါး၍ ဘဝပျက်နေကြသော သူများအား ကယ်တင်ပေးသနားတော်မူပါဘုရား၊ တပည့်တော်၏ စာအရေးအသားများ အမှားအယွင်းများ ရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရား။
အကျဉ်းချုပ်ဖြေမယ်၊ အမျိုးသမီး(၂ဝ)နှင့် (sex) ရှိလျှင် ယောကျာ်းမှာ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရဖြစ်တယ်၊ အမျိုးသမီး(၂ဝ)တွင် သာရက္ခ၊ သပရိဒဏ္ဍ အမျိုးသမီး(၂)ဦးနှင့် ဓနက္ကိတာစသော အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီး(၁ဝ)ဦး ပေါင်း(၁၂)ဦးတို့မှာ မိမိတို့၏အမျိုးသားမှတပါး တစ်ခြား ယောကျာ်းနှင့် (sex)ကိစ္စရှိလျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး(၂ဝ)ကို ''မာ ပိ မာပိ၊ ဘနှင့်ဘာ၊ ဉာ ဂေါ ဓမ် သ သာ၊ ဓ ဆန် ဘော ပ၊ သြ သြဒ၊ ကမ္မ ဓ မုဟာ''ဟု အကျဉ်းချုပ်မှတ်။
(၁) မာတုရက္ခိတာ (မိခင်စောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၂) ပိတုရက္ခိတာ (ဖခင်စောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၃) မာတာပိတုရက္ခိတာ (မိခင်၊ဖခင်စောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၄) ဘာတုရက္ခိတာ (မောင်စောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၅) ဘဂိနိရက္ခိတာ (အမစောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၆) ဉာတိရက္ခိတာ (ဆွေမျိုးစောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၇) ဂေါတ္တရရက္ခိတာ (အနွယ်တူစောင့်ရှောက်အပ်သောအမျိုးသမီး)
(၈) ဓမ္မရက္ခိတာ (တရာကျင့်ဖော်စောင့်ရှောက်အပ်သော အမျိုးသမီး)
(၉) သာရက္ခာ (စေ့စပ်ထားသူအမျိုးသမီး)
(၁ဝ) သပရိဒဏ္ဍာ (သွားလာရင်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဟု ကြေငြာထားသောအမျိုးသမီး)
(၁၁) ဓနက္ကီတာ (ဓနဖြင့်ဝယ်ယူအပ်သောအမျိုးသမီး)
(၁၂) ဆန္ဒဝါသိနိ (နှစ်ဦးသဘောတူနေထိုင်သူ)
(၁၃) ဘောဂဝါသိနိ (အသုံးအဆောင်ပေးထားသူဇနီး)
(၁၄) ပဋဝါသိနိ (အဝတ်အစားပေး၍ပေါင်းသင်း နေနေသောဇနီး)
(၁၅) သြဒပတ္တကိနိ (လက်ထပ်ထားသူဇနီး)
(၁၆) သြဘဋစုမ္ဗဋာ (အလုပ်အနားပေး၍ပေါင်းသင်းသောဇနီး)
(၁၇) ဒါသီစ (ကျွန်မဇနီး)
(၁၈) ကမ္မကာရီစဘရိယာစ (အလုပ်သမဇနီး)
(၁၉) ဓဇာပဋာ (ပြန်ပေးဆွဲဇနီး)
(၂ဝ) မုဟုတ္တိကာ (ခဏပေါင်းဇနီး)
အမေး(၄၇) + (၄၈) ariathitsarthdhammaron (ariathitsardhammaron@.gmail.com)
''မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော'' လူ့ဘဝဟူသည် ရခဲ၏ဟူသော ပါဠိတော်အား ''မန ဥတ္တရ သတ္တ ဘဝ ဒုလ္လဘ'' ၇-မျိုးသောဘဝမှ လွတ်မြောက်နေသော မနောအဖြစ်ဟူသည် ရခဲ၏ဟု ဘာသာပြန်မည် ဆိုက ရနိုင်ပါသလားအရှင်ဘုရား။
(၄၇)+(၄၈) ariathitsarthdhammaron ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
''မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော'' ဟူသောပါဠိကို လူ့အဖြစ်ရခဲသည်ဟုသာ ဘာသာပြန်မှ အဓိပ္ပါယ် အမှန်ထွက်သည်။ မေးခွန်းရှင်းပြဆိုသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်က မည်သည့်ကျမ်းဂန်မှာမှ မဆို၊ လက်ရှိပါဠိကို ပုံဖျက်၍ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေးခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဘာသာပြန်လျှင်မမှန်။
အမေး(၄၆) ဝတ်မှုံစု (ရန်ကုန်) (wutmhunsu@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား၊ ရိုသေစွာ မေးမြန်းလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား၊ ပါဠိစကားလုံး 'ဘယ'ကို ၁။ ဘေး၊ ၂။ အကြောက်တရားဆိုပြီး ဖွင့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်ဘုရား၊ ၂-မျိုးလုံး သင့်လျော်ပါသလားဆိုတာ ကရုဏာရှေ့ထား ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
ပါဠိစကားလုံးဘယကို ဘေးဟုလည်ကောင်း၊ အကြောက်တရားဟုလည်ကောင်း ဆိုကြရာ (၂)မျိုးလုံး သင့်လျော်တယ်။ ပါဠိစာပေ၌ ဘယဆိုတာ (၄)မျိုးရှိကြောင်း ဖွင့်ဆိုထားတယ်။
(၁) စိတ္တုတြာသဘယ- ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်
(၂) ဉာဏဘယ - ကြောက်စရာလို့မြင်တဲ့အသိဥာဏ်
(၃) အာရမ္မဏဘယ - ကြောက်စရာအာရုံ
(၄) သြတ္တပ္ပဘယ - မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုကြောက်ရွံ့မှု
အမေး (၄၅) မောင်စံသူ (thitsarayeyeat@gmail.com)
လကို မရောက်နိုင်ပုံ ဥပမာပြုပြီး ဟောထားတဲ့ တရားတော်တွေ နာယူဖူးပါတယ်ဘုရား၊ ယခုခေတ်မှာ လကို ဂြိုဟ်တုတွေ ဒုံးပျံတွေနဲ့ သွားနိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်ဘုရား၊ ဒီလို ကွဲလွဲချက်ကို ဘာသာခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထောက်ပြမေးမြန်းလာရင် ဘယ်လိုအဖြေ ပေးသင့်ပါသလဲဘုရား။
ဗုဒ္ဓကျမ်းစာအရ ''လ''ဆိုသည်မှာ လနတ်သား၏ ဗိမာန်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ မရောက်နိုင်ဟု ယတိကျပြော၍မရ။ ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်တော်မှာ လူသားကိုယ်တိုင် နတ်ပြည် ရောက်ကြောင်း ဖော်ပြသော ဇာတ်များရှိသည်။ မဃလုလင်၏ဇနီး သုဇာတာဘဝမှ ဖြစ်လာသည့် ဗျိုင်းမသည်ပင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်သို့ ပင်ရောက်ဖူးသည်။ ထို့ပြင် ဣဒ္ဓိဝိဓအဘိညာဉ်အခန်းမှာ အရှိန်အဝါကြီးမားတဲ့ 'လ'တွေ'နေ'တွေကိုပင် လက်နဲ့ထိကိုင်နိုင်င်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်လို့ ရုပ်ဝတ္ထု တစ်ခုမျှသာဖြစ်တဲ့ 'လ'အပေါ်( ပိဋကတ်စာပေအရ) ရောက်နိုင်တယ်ဟုပင် ယူဆနိုင်တယ်။ မရောက်နိုင် ဟု ယူဆသူများမှာမူ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မရောက်နိုင်ခြင်းမျှကိုသာ ရည်ညွန်းပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အမေး (၄၄) မောင်အောင်ကျော်သာ (kgyi18@gmail.com)
အရှင်ဘုရား ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်၊ ''ရဲဘော်မသေ သေသော်ငရဲမလား'' ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း စစ်သားများသေပြီးနောက် ငရဲကျမကျ သိလိုပါတယ် အရှင်ဘုရား။
''ရဲဘော်မသေ သေသော်ငရဲမလား'' ဆိုသည်မှာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်မှုနှင့် သူရသတ္တိကို ချီးမွမ်းမှုသာ ဖြစ်သည်။ စစ်သားများ သေပြီးနောက် ငရဲကျမကျ အတိအကျ ပြောလို့မရ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကံနဲ့သာ သက်ဆိုင်သည်။
အမေး(၄၃) မောင်လမင်းထွန်း (r.lay2020@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား စာကိုတစ်ခါမှ မပို့ဘူးသည့်အတွက်ကြောင့် အမှားပါလျှင် ခွင့်လွှတ် စေချင်ပါသည်ဘုရား၊ တပည့်တော်သိလိုသည့် အကြောင်းအရာမှာ ကောသလမင်းကြီးရဲ့ မိဖုရားကြီး အမည်ကလည်း မလ္လိကာ၊ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း မဟာဗန္ဓလစစ်သူကြီးရဲ့ မိဖုရားကြီးအမည်ကလည်း မလ္လိကာဖြစ်နေသည့် အတွက်ကြောင့်တစ်ယောက်တည်းလား တစ်ဦးစီလား သိလိုပါသည်ဘုရား။ စာက စရိုက်စဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ပြင်ဆင်ပြီး ဖတ်စေလိုပါသည်ဘုရား။
ကောသလမင်းကြီး မိဖုရားက ပန်းဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးသူ၏ သမီးဖြစ်သည်။ အမည်မှာ မလ္လိကာ။ ဗန္ဓလစစ်သူကြီးကတော်က မလ္လလူမျိုးဖြစ်၍ မလ္လတိုင်းမှ ရောက်လာသည်။ ဗန္ဓလ စစ်သူကြီးကလည်း မလ္လလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဗန္ဓလစစ်သူကြီးကတော် မလ္လမင်းသမီးမှာ မဟာလတာ တန်ဆာ ဝတ်ဆင်နိုင်သူ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အမည်တူသော်လည်း လူချင်းမတူပါ။
အမေး(၄၂) ဦးထွန်းထွန်းအေး (utuntunaye@gmail.com)
အရှင်ဘုရား ရူပဗြဟ္မာဘုံတွင် ပါဝင်သော သုဒ္ဓါဝါသ၅-ဘုံရှိ ဗြဟ္မာတို့သည် ရုပ်ချည်း သက်သက်(ဝါ) ရုပ်နာမ်၂-ပါးလုံး ရှိပါသလား၊ ထိုအရိယာဗြဟ္မာတို့၏ ထူးခြားမှုများရှိပါက ဖြေကြားးပေး တော်မူပါဘုရား။ တပည့်တော်၏ မေးခွန်းတွင် အမှားပါက ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရား။
သုဒ္ဓါဝါသ ငါးဘုံရှိ ဗြဟ္မာတို့မှာ ရုပ်၊နာမ်(၂)ပါးလုံး ရှိကြသည်။ အနာဂါမ်ဖြစ်ပြီးးမှသာ သုဒ္ဓါဝါသဘုံ၌ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို သုဒ္ဓဝါသဘုံသည် အနာဂါမ်နှင့် ရဟန္တာများသာ ရှိသော ဘုံဖြစ်သည်။ အရိယာဖြစ်ပြီးသော ဗြဟ္မာမှန်သမျှ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးလျှင် အထက်ထက်ဘုံများ၌သာဖြစ်သည်။အောက်ဘုံများ၌ မည်သည့်အခါမျှ ပြန်၍မဖြစ်။
အမေး(၄၀) အောင်မျိုး (orthoaungmyo@gmail.com)
ခန္ဓာနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ(၂)မျိူး ခွဲခြားမှတ်ရမည်။ ရုပ်၊ နာမ် တရားအားလုံးသည် ခန္ဓာငါးပါး၌ စာရင်းဝင် ၏။ တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ စွဲလန်းမှုတွေ ဖြစ်လျှက်ရှိသော ရုပ်တရားများ၊ လောကုတ္တရာ စိတ်၊
စေတသိတ်မှ တစ်ပါးသော နာမ်တရားများသည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတွင်ပါသည်။
အမေး(၃၉) နန်းခင်ခင်ဦး (nang.khinkhinoo66@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား...နေကောင်းကျန်းမာပါလားဘုရား...တပည့်တော် မန္တလေးကပါဘုရား။
အဘိဓမ္မာထဲက ပကိဏ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းချုပ်လေးကို သိချင်ပါတယ်ဘုရား။
ပကိဏ်းပိုင်းမှာ စိတ်(၈၉)ကို ‌ဝေဒနာ၊ ဟေတု၊ ဒွါရ၊ အာရုံ၊ ၀တ္ထုများဖြင့် ပိုင်းခြား‌ဝေဖန်ပြသည်။ စိတ်ကို‌ ဝေဖန်သဖြင့် စေတသိတ်လည်းပါဝင်သည်ဟု မှတ်ရမည်။
အမေး(၃၈) ဦးလွင်ဦး (theikddi@gmail.com)
(၁) ရူပကခန္ဓာ ဆန့်ကျင်ဖက် အကြောင်းနှင့်ဆုံလျှင် ထင်ရှားစွာ‌ပြောင်းလဲတတ်ပြီး အတုံးအခဲပုံသဏ္ဌာန်ကို အခြေပြုတဲ့ရုပ်အစု။
(၂) ဝေဒနာက္ခန္ဓာ - စိတ်၌ဖြစ်ပေါ်သော ခံစားမှုအစု။
(၃) သညာက္ခန္ဓာ - စိတ်၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် အာရုံကိုမှတ်သားခြင်း၊ အမှတ်အသားအတိုင်းပြန်၍သိခြင်း သဘောအစု။
(၄) သင်္ခါရက္ခန္ဓာ - ကြံစည်ခြင်း၊ စိတ်ကူးခြင်း၊ လိုချင်ခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းစတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ဖန်တီးမှု အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်စေတတ်သည့် သဘောအစု။
(၅) ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ - ၀တ္ထု၊ ဒွါရတို့၌ ထင်ဟပ်လာသော အာရုံကို ရယူမှု၊ သိတတ်မှုစိတ်အစု။
(B) သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုသည်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကို တကယ်မရှိတဲ့အတ္တနှင့်ပုံဖော်တွေးထင်ပြီးမှားယွင်းတဲ့ အမြင်ကိုခေါ်သည်။
အမေး(၃၇) ကိုကျော်သန်း (kokyawthan.maymyo@gmail.com)
အရှင်ဘုရား မေးလျှောက်ချင်ပါတယ် ခွင်ပြုပေးပါဘုရား အမှားပါလျှင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ စာလုံးပေါင်းမှားခြင်းသည်းခံပေးပါဘုရား
တပည့်တော်မြင်ဘူးသောအရာ အကြွင်းမရှိ အမှန်တိုင်းသာသိရှိလိုပါတယ် တပည့်တော် တစ်ညမှာဝိပဿနာလုပ်ပါတယ် ခန္ဓာ အလွန်အကျွံ
ဖောက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ် ဖွဲငွေ့ကိုမီးလောင်သလို ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာ မြင်နေရပါတယ် ဝေဒနာတက်လာလေလေ မုန်းလာလေပါပဲ
ကြာကြာမုန်းလာတော့ ဆင်းရဲတာနောင်တစ်ဖန် မလိုချင်သည့်အချိန် ရုပ်ပျောက်ပြီး ငြိမ်းအေးနေတာ တစ်ခဏတွေ့လိုက်ရပါသည် တိကျစွာဖြေကြားပေးပါရန်
နောက်ထပ်လည်းမေးပါအုံးမယ်ဘုရား ဒါလေးကို အရင်ဖြေပေးစေလုိပါတယ်ဘုရား..
(၃၇) ကိုကျော်သန်း၏ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
တရားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူများကပြောရင် အထင်မျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမေး(၃၆) အရှင်ဣန္ဒာစရိယ စေတီလှချောင်ဆရာတော် စစ်ကိုင်း၊ (ashinpower@gmail.com)
ဆရာတော် အဘိဓမ္မာသိပ္ဗံကို အဝေးသင် တက်လို့ရသည်ဟုကြားသိရပါသည်။ တပည့်တော်တက်လိုပါသည်။ ညွှန်ကြားတော်မူပါ။
အ‌ဝေးသင်တက်လို့ရသည်။ ရန်ကုန်ကမ္ဘာအေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အမေး(၃၅) မောင်သူရိန်ဇော် (jame.cop37@gmail.com)
အရှင်ဘုရား ရဟန္တာ ဖြစ်သွားရင် ၀င်လေထွက်လေ မှတ်ပြီးအိပ်ခြင်းဖြင့် အိပ်သည်ဟု ကြားဖူးပါသည်ဘုရား...မည်သို့ဖြစ်ပါသနည်း..
မြတ်စွာဘုရားလည်း အိပ်မက်မက်ပါသည်ဟု လေ့လာဖူးပါသည်...
၀င်လေထွက်လေ နှင့် ကျိန်းပြီးအဘယ်ကြောင့် အိမ်မက်မက်ပါသနည်းဘုရား...
ရဟန္တာဖြစ်ရင် ၀င်လေ၊ထွက်လေ မှတ်အိပ်သည်ဟု စာထဲမှာမရှိပါ။ အမှန်က ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကျိန်းစက်ခြင်းသည် ထိန၊
မိဒ္ဒကြောင့်မဟုတ်ပဲ ရုပ်ခန္ဓာ၏ ပင်ပန်းမှုကြောင့်သာဟု ဆိုသည်။ ကုက္ကိုပင် စသော အချို့သစ်ပင်များလည်း အသိစိတ်မရှိသော်လည်း
နေ၀င်ရင်အိပ်ကြသည်။ ဘုရား၊ ရဟန္တာများ အိမ်မက်မမက် ပါ။ ၀ိပ္ပလ္လာသ ကင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့် မမက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၀ိပ္ပလ္လာသ မကင်းသေးတ
ပုထုဇဉ်များနှင့် သောတာပန်၊ သဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်တို့သာမက်ကြသည်။
အမေး(၃၄) ကိုထွန်း (2009hector@gmail.com)
ဘုရားက ရတနာ ( ၃ ) ပါးဘဲ ဟောခဲ့တယ်ဟုထင်ပါတယ်....
ခုကျတော့ အနန္တော အနန္တငါးပါးဆိုပြီး ဖြစ်နေတယ်...ဘယ်အချိန်ကစပြီး အနန္တော၊ အနန္တငါးပါးပေါ်လာတာလဲ...သိချင်လို.ပါအရှင်ဘုရား
အနန္တငါးပါး၊ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးဆိုတာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မပြစ်မှားထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို ပညာရှိများကစာရင်းလုပ်ပြတာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘုရားဟောမဟုတ်ပါ။
အမေး(၃၃) hla moe myint (bloodseeker609@gmail.com
(၃၃) hla moe myint ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် ရတာဖြစ်တယ်။ လူ့ဘ၀ရခိုက် ကုသိုလ်များများလုပ်နိုင်မှ အကျိုးရှိမယ်။
ဘုန်းဘုန်းဟောတဲ့ “လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ” တရားကို နာကြည့်လိုက်ပါ။
အမေး(၃၂) အရှင်ဇာဂရ (ashinjagara23@gmail.com)
တပည့်တော်များ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပို့ချစဉ် ကလေးမလေးတစ်ယောက်က ဘုန်းဘုန်း စနေ တနင်္ဂနွေစတဲ့နေ့ရက်တွေက ဘုရားမပွင့်ခင်
ဟိုအရင်ကတည်းကရှိတာလားဘုရားလို့ အမေးခံရဘူးပါတယ်ဘုရား တပည့်တော်လဲ မသိလို့ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား ...
စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုတာတွေက ဗေဒင်ကျမ်းတွေရဲ့အဆိုဖြစ်တော့ ဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးယခင်ထဲကရှိတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါတွေက နက္ခတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခေါ်တွေမျှသာ ဖြစ်တယ်။
အမေး(၃၁) Kyaw Kyaw(kyawkyaw.rocker01@gmail.com)
ဘုန်းဘုန်း တပည့်တော် ယခုဘ၀မှာ မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့သူပါဘုရား။ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ်မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တပည့်တော်တို့ အိမ်နားကလူတယောက်ကြတော့ မိဘကိုလည်း နားမလည် လုပ်လည်းမကျွေးဘူး အရက်ပဲ လည်သောက်နေတာ
ဒါပေမဲ့အခုချမ်းသာသွားပီ နောက်ပြီး တပည့်တော်လည်းအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်လာဘူး အဲဒါဘာ့ကြောင်ဆိုတာ ရှင်းပြသွန်သင်ပေးတော်မူပါဘုရား။
(၃၁) kyawkyaw ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
မိဘကို လုပ်ကျွေးနေတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ မြတ်စွာဘုရား ချီးမွမ်းတဲ့ မင်္ဂင်္င်္င်္လာကုသိုလ် ဖြစ်တယ်။ အဆင်‌ပြေတာ၊ မ‌ပြေတာက တစ်ခြားအကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မိဘကို မလုပ်ကျွေးသူကို အားမကျပါနဲ့။ အရက်သောက်တာ ချမ်းသာတာကို အားမကျပါနဲ့။
အဆင်ေ‌ပြမှု၊ မ‌ပြေမှု၊ ချမ်းသာမှု၊ ဆင်းရဲမှု တွေဆိုတာ ထာဝရမဟုတ်၊ တစ်ခဏသာဖြစ်တယ်။
အမေး(၃၀) အောင်ကျော်ထွန်း (aktun31@gmail.com)
မေတ္တာသုတ်ဆိုတာ ကျင့်ကြံရမယ့်တရား၊ မင်္ဂလသုတ်ဆိုတာလဲ ကျင့်ကြံရမယ့်တရားတွေလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရား
ရွတ်ဖတ်နေယုံနဲ့ ပြီးမယ့်အရာတွေမဟုတ်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်ဘုရား။ ထိုအတူ တရားဦး ဒေသနာ၊ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်၊ အနတ္တလဏ္ခာသုတ်များဟာလဲ
သေချာနားလည်သဘောပေါက် (realization thru wisdom) ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ တရားတော်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
သို့သော် လူတော်တော်များများမှာ နားမလည်တဲ့ပါဠိတွေကိုရွတ်ဖတ်နေယုံနဲ့ အကျိုးခံစားရမယ်ထင်နေကြပါတယ်ဘုရား...
မင်္ဂလသုတ်ကို ပါဠိလိုနားမလည်ပဲရွတ်ပြီး နေထိုင်မှုဘ၀မှာ တရားတော်နဲ့မညီတာတွေပြုသူတွေမှာ အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာရနိုင်မရနိုင် အရှင်ဘုရားထံ ရိုသေစွာ လျှောက်ထားမေးမြန်းလိုက်ရပါတယ်ဘုရား။
အဓိပ္ပါယ်မသိပဲ ရွတ်ဖတ်ရုံသက်သက်၊ ဘုရား၊ တရားတော်အမှတ်ဖြင့် ကြည်ညို၍ ရွတ်လျှင် ကုသိုလ်တော့ ရနိုင်သည်။
တကယ်တော့ ပရိတ်တရားတော်များဆိုတာ မေတ္တာနှင့် သစ္စာအဓိက အေ‌ခြခံ ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ တကယ်နားလည်ပြီးရွတ်မှ ပို၍အကျိူးရှိနိုင်မယ်။
မေတ္တာ၊ သစ္စာမပါတဲ့ နတ်တွေကိုသာ ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်တဲ့ တန္တရ၀ါဒနှင့် မတူ၊ ဓမ္မစင်္ကြင်္င်္ာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်များကို အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်
လေ့လာပြီး ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းမှသာ ပြီးပြည့်စုံသော အကျိုးတရားရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလသုတ်အလွတ်ရသော်လည်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုလျှင်
ဆေးရှိလျက်မသောက်၍ ရောဂါမပျောက်တာ နှင့်တူသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များမှာ ကြားနာမှတ်ထား ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးနောက် ဓမ္မနု ဓမ္မအကျင့်ကို ကျင့်ရမည်။
သို့မှသာ ပြည့်စုံသော အကျိုးတရားရရှိနိုင်မည်။
အမေး(၂၉) မောင်စိုးမိုးထွန်း (evil.smh@gmail.com)
ဆံတော်ရှစ်ဆူ ထဲမှ ဆံတော် အံတော် ရေသနုတ်တော် ရေစစ်တော် တောင်ဝှေးတော် ၅ဆူ ကိုသာသိပါသည်ဘုရား....
ကျန် ၃ဆူကို မသိပါဘုရား...... တပည့်တော်ကို ပြန်လည်ဟောပြပေးပါရန် နှင့် ဆံတော်ရှစ်ဆူအကြောင်း တစ်ဆူချင်းစီအကြောင်း အသေးစိတ်ကိုဟောပြပေးတော်မူပါရန် ခြေတော်ဦးခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား.....
(၂၉) မောင်စိုးမိုးထွန်း၏ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အမေး(၂၈) Zaw Naing Aung (1biotechnique@gmail.com)
ဂါထာတစ်ထောင်ဆင်ယင်သော ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ဟာ ပိဋကတော်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းမှာ ပါပါသလဲ ဘုရား
တပည့်တော်တော့ ခုဒ္ဒကနိကာယ် စရိယာပိဋကမှာတော့ ဇာတ်တော်တွေကို အကျဉ်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကိုသာ လေ့လာရပါတယ်ဘုရား။
(၂၈) Zaw Naing Aung၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
‌ဝေဿန္တရာဇာတ်သည် ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဇာတကပါဠိ ဒုတိယတွဲ၌ အပြည့်အစုံပါရှိသည်။
အမေး(၂၇) သောတုဇန ရဟန်း (aungbohein.80@gmail.com)
တပည့်တော်တို့ ဂေါတမဘုရားရှင် ပါရမီဖြည့်စဉ် ရဟန်းဘ၀ ၉ ဘ၀သာ ရခဲ့သည်ဟု နာယူမှတ်သားဘူးပါသည်ဘုရား။
မည့်သည့်ကျမ်းတွင် ပါရှိသည်ကို သိလိုပါသည် အရှင်ဘုရား။
(၂၇) သောတုဇန ရဟန်း၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ဂေါတမဘုရားရှင် ပါရမီဖြည့်စဉ် ဘုရားနှစ်ဆယ့်လေးဆူနှင့် ကြုံတွေ့၍ ဗျာဒိတ်ခံခဲ့သည်။ ထိုတွင် ဘုရားကိုးဆူထံ၌သာ
ရဟန်းအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်ကို အဋ္ဌသာလိနိအဋ္ဌကထာနိဒါန်းလာ ဗျာဒိတ်ခံခန်းမှာ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုမှတ်သားပါ။
(၁) ကောဏ္ဍည ဘုရားလက်ထက် ၀ိဇိတာဝီအမည်ရှိ စင်္ကြင်္ာဝတေးမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၂) မင်္ဂင်္လ ဘုရားလက်ထက် သုရုစိပုဏ္ဏားဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၃) သုမေဓာ ဘုရားလက်ထက် ဥတ္တရ မည်သော ပုဏ္ဏားလုလင်ဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၄) သုဇာတ ဘုရားလက်ထက် စင်္ကြင်္ာဝတေးမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၅) ‌ဝေဿဘူ ဘုရားလက်ထက် သုဒဿနမည်သောမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၆) ဖုဿ ဘုရားလက်ထက် ၀ိဇိတာဝီမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၇) ကကုသန် ဘုရားလက်ထက် ခေမမည်သောမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၈) ကောဏာဂမန ဘုရားလက်ထက် ပဗ္ဗတမည်သောမင်းဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
(၉) ကဿပ ဘုရားလက်ထက် ဇောတိပါလုလင်ဖြစ်စဉ် ရဟန်းပြုသည်။
အမေး(၂၆) ငြိမ်းချမ်းမြင့် (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)
အရှင်ဘုရား လောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြတ်စွာဘုရား တရားတော်တွေထဲမှာ တားမြစ်ထားချက် တွေရှိပါသလားဘုရား။
ရှိရင် အရှင်ဘုရား တရားတော်တွေထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်ထည့်သွင်းဟောကြားညွှန်ပြပေးတော်မူပါဘုရား။
သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်မှာ စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးခြင်း(၆)မျိုးတွင် လောင်းကစားခြင်းနည်းအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ငါးပါးသီလတွင် မထည့်သွင်းသော်လည်း ပျက်စီးကြောင်းအဖြစ် ပောာကြားထား၍ ရှောင်ရမည်သာဖြစ်သည်။
အမေး(၂၅) မောင်စိုးမိုးထွန်း (evil.smh@gmail.com)
အရှင်ဘုရား...... တပည့်တော် ကို တစ်ခုလောက်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါအရှင်ဘုရား.....
ဆံတော်ရှစ်ဆူ ထဲမှ ဆံတော်. အံတော်. ရေစစ်တော်. ရေသနုတ်တော်. တောင်ဝှေးတော် စတဲ့ ၅ဆူပဲသိပါတယ်အရှင်ဘုရား....
ကျန် ၃ဆူ နဲ့ ဆံတော်တစ်ဆူခြင်းစီရဲ့ အကြောင်းများကို တပည့်တော်အား ဟောပြောပြသပေးပါရန် ရိုသေဦးခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား....
အမေး(၂၄) ငြိမ်းချမ်းမြင့် (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)
၁။ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သော နတ်ဗြဟ္မာများ ရှိပါသလား ဘုရား နတ်ဗြဟ္မာတွေမှာ အယူကွဲပြားမှုတွေရှိပါသလား ဘုရား။ အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသအယူရှိပါသလားဘုရား။
၂။ဗုဒ္ဓဘာသာ မယူမိဘဲ နတ်ဗြဟ္မာ ဖြစ်ကြောင်းတရား ဘုရားတရားတော်နှင့်အညီနေထိုင်သော ဘာသာခြားများရော နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင် နတ်ဗြဟ္မာများရောဖြစ်နိုင်ပါသလား ဘုရား။
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သော နတ်ဗြဟ္မာများစွာရှိသည်။ အယူကွဲပြားမှုများလည်းရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နတ်ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်သော အကျင့်ရှိနိုင်သည်။ မဂ္ဂင်တရားရှစ်ပါးအကျင့်ရှိမှသာ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်။ ၄င်းအကျင့် မရှိလျှင် မည်သူမျှ နိဗ္ဗာန်မရောက်။
အမေး(၂၃) ငြိမ်းချမ်းမြင့် (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)
သင်္ကန်း နှင့်ပါတ် သက်ပြီး မြတ်စွာဘုရား ပညတ်ထားတာ ရှိပါသလားဘုရား။ တရုတ်ဘုန်းကြီး ဂျပန်ဘုန်းကြီး မြန်မာဘုန်းကြီး သင်္ကန်း အရောင် ပုံစံ မတူလို့ပါဘုရား
ပွင့်တော် မူပြီး သော မြတ်စွာဘုရား တွေရဲ့ သင်္ကန်း တူပါသလား ဘုရား
သင်္ကန်းအရောင်အတိုင်းအတာ ချုပ်လုပ်ပုံအလုံးစုံ ဘုရားပညတ်ချက်ရှိသည်။ မြန်မာဘုန်းကြီးသင်္ကန်း အရောင်မှာ ၀ိနည်းကျမ်းအဆိုအမိန့်
အညီ အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘုန်းကြီး ၊ဂျပန်ဘုန်းကြီးများ၏ သင်္ကန်းများသည် နောက်ပိုင်းမှ တီထွင်ထားသော သင်္ကန်းများဖြစ်သည်။
သင်္ကန်းဝတ်စုံသည် အလွန်ရှေးကျသော ၀တ်စုံဖြစ်သည်မှာထင်ရှားသိသာ၏။
ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားအဆူဆူမှာ ခေတ်မတူခြင်း, အရပ်အမောင်းအနိမ့်အမြင့် မတူခြင်းကြောင့် တူနိုင်စရာမရှိ၊ခေတ်ပြောင်းလျှင် အသွင်ပြောင်းဖြစ်မည်။
အမေး(၂၂) တကာဇော်လင်း/ရန်ကုန် (uzawlin52@gmail.com)
၁.မြတ်စွာဘုရား..သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော် ရပြီး၊ တစ်ခုသော သတ္တာဟ မှာ စင်္ကြံလျှောက် တာသည်၊ ဖိုလ်ဝင်စားပြီး၊ လျှောက်တာ..လား?
၂.ဗိမ္မသာရမင်းကြီး၊ အကျဉ်းစံ စဉ် လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ထွက်တာ၊ ဖိုလ်ဝင်စားခိုက်မှာပါလား..ဘုရား ?
၃.ဖိုလ်ဝင်စားစဉ်..နိဗ္ဗာန်သာ အာရုံ ဖြစ်သဖြင့်၊ လမ်းလျှောက်လျက်..၀င်စားနိုင်ပါသလား..ဘုရား..။ ရိုသေစွာ..လျောက်ထား ပါသည်..ဘုန်းဘုန်းကြီး..ဘုရား..။
(၂၂) တကာ ဇော်လင်း/ရန်ကုန်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
(၁) ဖိုလ်ဝင်စားလျက် စင်္ကြလျှောက်သည်မဟုတ်။
(၂) ဗိမ္မသာရမင်းကြီးအကျဉ်းစံစဉ် သောတာပတ္တိဖိုလ်ဝင်စားပြီးမှ ဖိုလ်မှထပြီးလျှင် ဖိုလ်ချမ်းသာ အရှိန်ဖြင့်လမ်းလျှောက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် ပို၍ တင့်တယ်သည်ဟုဆိုသည်။
(၃) အပ္ပနာဇောသည် ဣရိယာပုတ်ကို ထိန်းနိုင်သည်ဆိုသဖြင့် လျောင်း၊ထိုင်၊ရပ်၊သွား၊ ဣရိယာပုတ် လေးပါးလုံးမှာပင် ဖိုလ်ဝင်စားနိုင်သည်ဟု မှတ်သင့်သည်။
အမေး(၂၁) Zin Min Lwin (zinminlwin7@gmail.com)
Ashin pa yar, may i know what happened to the son of ashin gautama payar? since there is no clear explanation on him?
(၂၁) Zin Min Lwin၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ဂေါတမဘုရား၏ သားတော်ဆိုတာ ရှင်ရာဟုလာ ဟုဆိုတာလား၊ (၇)နှစ်အရွယ်မှာ ကိုရင်ဝတ်တယ်၊ အသက်(၂၀)မှာ ရဟန်းဖြစ်တယ်၊
ရဟန်းဖြစ်ပြီးနောက် စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ်ကို နာယူ၍ ရဟန္တာဖြစ်တယ်၊ မိထွေးတော် ဂေါတမီပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို သွားရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်။ ဤမျှသာ မှတ်တမ်းသိရသည်။ ရာဟုလာနှင့် ပတ်သက်သော သုတ္တန် များစွာရှိသည်။ ဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့ ရှင်ရာဟုလာ၏ ဘ၀နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတရားကို နာကြည့်ပါ။၊ စာအုပ်လည်း ဒီနှစ်မကုန်မီထွက်မည်။
အမေး(၂၀) tharkinwethwe (tharkinwethwe.mgy@gmail.com)
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ တိုးတက်ဖို့ကို ဘာသာရေးနဲ့ ဘယ်လိုပုံဖော်ရင်ကောင်းမလဲ ဘုရား အခုလောလောဆယ် တပည့်တော်ဟာ
ပညာဒါနပေးရင်း ဘာသာရေးအသိတွေပေးနေသူပါဘုရား ဒါကြောင့်မို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်ပေးတော်မူပါဘုရား။
(၂၀) tharkinwethwe ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ကိုယ်တတ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့် ပညာဒါနပေးရင်း ဘာသာရေး အသိဉာဏ်ပေးတာကိုဆက် လုပ်ပါ။
You must do your best. အားလုံးကောင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက် မထားပါနဲ့။
အမေး(၁၉) စောမြငယ်သွေး (secondarysmoker@gmail.com)
ခြေတော်အစုံကိုဉီးခိုက်၍လျောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါသော ဗုဒ္ဓဘာသာအယောင်ဆောင်၍
သာသနာ့အရေခြုံကာ မော်တော်ကားဂိတ်၊ မီးရထားဘူတာ၊ ဆေးရုံရှေ့တို့၌ လမ်းစရိတ်ပြတ်၍၊ နေမကောင်း၍ အစရှိသည်ဖြင့်အကြောင်းပြကာ
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာလျက်ရှိသော မသမာသူများအား မွန်မြတ်သန့်စင်သည့်ဘာသာတရားအားညစ်နွမ်းစေရန်ဆောင်ရွက်နေသူများဟု
ယူဆမိပါ၍ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသင့်ပါကြောင်း လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
အမေး(၁၈) အရှင်သစ္စဥာဏ (usaccanyana@gmail.com)
ဆရာတော်ဘုရား၏ သီးခြား ကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို သိလိုပါသည်အရှင်မြတ်ဘုရား။
(၁၈) အရှင်သစ္စဥာဏံ၏ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာသာ ရှိတာဖြစ်လို့ ကမ္ဘာလုံးကြီး၏ထိပ်ဖျားဝင်ရိုးစွန်းဟာ
မြင့်မိုရ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်၊ သုတ္တနိပါတ် နာလကသုတ်အဋ္ဌကထာမှာ မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်မှာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိသည်၊ အောက်ခြေမှာ အသူရာပြည်ရှိသည်၊
မြင့်မိုရ်တောင်၏ အလယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော လူဘုံရှိသည်ဟုဆိုတာကို သဘောကျသည်။
အမေး(၁၇) May Zin Mg (mayzin.ice@gmail.com)
ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါတယ် ဘုန်းဘုန်း.
တပည့်တော်ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ပါ.ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုကို သေချာမသိသေးပါဘူး. အပေါ်ယံအသိထက် နည်းနည်းလောက်သာတယ်လို့ပဲ ပြောဝံ့ပါတယ်.
တနေ့က ဘာသာမဲ့ မိတ်ဆွေ တွေရယ် တပည့်တော်ရယ် ဘာသာရေးကို ကျွန်တော်ထက် လေ့လာသိရှိထားတဲ့ နောက်မိတ်ဆွေ တစ်ဦးရယ် ပြောဖြစ်ကြပါတယ်
အဲလို ပြောဖြစ်ရင်းနဲ့ တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာ ဝေေ၀၀ါးဝါးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်. တပည့်တော် အဲဒီ ပြောဖြစ်တဲ့ စကားတွေကို ဘုန်းဘုန်းဆီ ပို့လိုပါတယ်.
ဒီ ထဲမှာ ကူးထည့်ရင် မဆန့်လောက်ဘူးထင်လို့ပါ. ဘုန်းဘုန်း ဖတ်ကြည့်ပြီး အကြံဥာဏ်ဖြစ်ဖြစ် သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ဖြစ် ပေးနိုင်မလား ဆိုတာ သိလိုပါတယ် ဘုရား
(၁၇) May Zin Mg ၏ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အမေး(၁၆) နတ္တိ (nutthti@gmail.com)
အဇာတသတ်ဟာ မမွေးခင်ကတည်းက ဖခင်ကိုသတ်မည့်သားမှန်းသိပါလျက်နဲ့ ဖခင်ဘုရင်ကြီးဟာ ဒီလိုကြီးလေးတဲ့ကံကြီးကိုမကျူးလွန်အောင်
အဇာတသတ်မင်းသားကို ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူဖြစ်အောင်လမ်းမပြခဲ့တာပါလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ် ဘုရား။
အဇာတသတ်ကို သူ့အဖေက မဆုံးမတာမဟုတ်၊ ဆုံးမခဲ့တယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင် လမ်းမပြခဲ့ တာ မဟုတ်ဘူး၊ လမ်းပြခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျားကိုယဉ်ပါးအောင်ဆုံးမနိုင်သော်လည်း သတ်သတ် လွတ်စားအောင် လုပ်လို့မရသလိုဖြစ်ပါတယ်။
အမေး(၁၅) Kaung Nyunt (wakeup.myanmar2013@gmail.com)
အရှင်ဘုရား. . တပည့်တော် တခါတလေမှာ သေခြင်း တရားကိုတွေးမိပြီး ကြောက်လန့်မိပါတယ် ဘုရား ။
သေခြင်းတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရဲအောင် မည်သို့ နေထိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ကို လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးပါ ဘုရား။
(၁၅) Kaung Nyunt ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
သေခြင်းတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ရဲအောင် အဘယသုတ္တန်ကို မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါသည်။
(၁) ကာမအာရုံတို့၌ တွယ်တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားခြင်း၊
(၂) မိမိကိုယ်ကာယ၌ တွယ်တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားခြင်း။
(၃) အကုသိုလ်ကိုမလုပ်ပဲ ကုသိုလ်ကိုကြိူးစားခြင်း။
အဆိုပါအရည်အချင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် သေခြင်းတရားကို ရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်နိုင်သည်။အင်္ဂ္ဂုတ္တရ်နိကာယ် စတုက္ကနိပါတ် (အဘယသုတ်- ပါဠိစာမျက်နှာ-၄၉၃။)
အမေး(၁၄) ဆန်းလင်းထွန်း (sannlynnhtun@gmail.com)
တပည့်တော်တို ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူသားတွေရဲ့အစကို မြတ်စွာဘုရားက ဟောခဲ့ပါသလားဘုရား.
ခရစ်ယန်ဘာသာတွေဆိုရင် သူတို့ ဘုရားသခင်ကဖန်တီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရား..
ကမ္ဘာတစ်ခုရဲ့ လူသားတို့၏အစကို အဂ္ဂညသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါသည်။ ဒီဃနိကာယ်ပါထိက ၀ဂ္ဂပါဠိတော်(မြန်မာပြန်)ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
အမေး (၁၃) ဒေါက်တာရဲဝင်း (dr.yewin.82ygn@gmail.com)
အရှင်ဘုရား ......... တပည်.တော် သိချင်တာလေး မေးခွင့်ပြုပါ ဘုရား။
ဘ၀မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံရရင် ဘယ်လို နှလုံးသွင်းပြီး ဆင်ခြင်ရမလဲ သိချင်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။
စိတ်ညစ်စရာကြုံရရင် ဆက်မတွေးဘဲမေ့ပစ်လိုက်၊ စိတ်ချမ်းသာစရာကိုသာရှာတွေးပါ…ဒါကတစ်ခု၊ စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ချမ်းသာစရာဆိုတာ
လောကသဘာဝ လောကဓံမျှသာဖြစ်သည်။ အကောင်းအဆိုး မည်သည့် အရာမျှမမြဲဟု နှလုံးသွင်းပါ…ဒါကတစ်ခု၊
လောကဓံမှန်သမျှ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရန် သမထကျင့်စဉ်၊ ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမည်၊ သတိသမ္ပဇည လေ့ကျင့်နည်းကို မဟာသတိပဋ္ဌနသုတ်မှာ လာတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ပါ။ အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။
အမေး(၁၂) စောမဉ္ဇူ (flowerroyal2010@gmail.com)
အရှင်ဘုရားတို.ဘွဲ့.နာမည်ရှေ.မှာ တချို.ကိုအရှင်လို့၊ တချို့ကို ဦးလို.တပ်ခေါ်တာ ဘာနဲ.ဆိုင်ပါသလဲဘုရား။ ဘွဲ့နဲ.ဆိုင်တာပါလား၊ ၀ါနဲ.ဆိုင်ပါသလားဘုရား။ ဒါမှမဟုတ်နာမည်ခေါ်ကောင်းအောင်လို.လားဘုရား။
(၁၂) စောမဉ္ဇူ ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ဘွဲ့ရှေ့၌ အရှင်လို့ ဦးလို့တပ်တာ ဘွဲ့နဲ့မဆိုင်၊ ၀ါနဲ့လည်းမဆိုင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဆန္ဒ နှင့်သာဆိုင်သည်။
လူတွေလည်းဦးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ-ဦးဖိုးကျား၊ လူနှင့်မတူအောင်ရေးလျင် အရှင်ဟု သာရေးရသည်။ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများ၌
အရှင်အစား သခင်ဟုသုံးခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတွင် ခင်ကြီး ဟုလည်း သုံးသည်။ ရှေးခေတ်စာပေများ၌ ရှင်ကိုသုံး၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာဟုဖော်ပြသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်မူ ကိုရင်များ ဘွဲ့၏ရှေ့မှာ ရှင်၊ ရဟန်းများ၏ ဘွဲ့ရှေ့မှာ အရှင်ဟုရေးကြသည်။
အမေး(၁၁) Nyi Lwin Myint (nyilwinmyint@gmail.com)
သာသနာနှစ် 5000 ဆိုသည်မှာ ဘုရားဟောတွင်ပါပါသလား.
မိမိအသက် 40 ရှိပါပြီ စာအုပ်များတွင် မတွေ့သောကြောင့် အငြင်းပွားဖွယ်များဖြစ်နေရပါသည်။ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား
(၁၁) Nyi Lwin Myint ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
မြတ်စွာဘုရားတရားမဟောမီ သီလပေးသည်ဟုမှတ်တမ်းမရှိပါ၊ကျောင်းအလှူများတွင် အနုမောဒနာ တရားဟောသည်ဟုသာပါသည်။ရေစက်ချသည်ဟုမပါ၊ ‌ဝေဿန္တရာမင်းကြီး ဆင်ဖြူတော်လှူစဉ်က
ရွှေကရားကို ကိုင်၍ ဆင်နှာမောင်းကို ပုဏ္ဏားတို့၏ လက်ထဲကိုထည့်ပြီး ရေစင်သွန်းချလျက်လှူသည်။ ရေတစက်စက်ချ၍ လှူချင်းမဟုတ်။ သာသနာနှစ်(၅၀၀၀)ဆိုသည်မှာ အဋ္ဌကထာဆရာများ၏ မှတ်တမ်း၌သာရှိသည်။
သို့သော် ဘိက္ခူနီ သာသနာ ခွင့်ပြုခဲ့စဉ် အမျိုးသမီးများ ဘိက္ခူနီဝတ်ခွင့်မပေးပါက သာသနာနှစ် (၁၀၀၀)တည်နိုင်၏။ ခွင့်ပေးလိုက်သဖြင့် နှစ်(၅၀၀)သာ တည်နိုင်သည်ဟု မိန့်ဆိုသောစကား ၀ိနယ ဘိက္ခူနီခန္ဓကနှင့် အင်္ဂုတ္တရ
ဂေါတမီသုတ်တို့တွင်ပါရှိသည်။ ထိုအခြေအနေကို ဂရုဓံ (၈)ပါးဖြင့် ကြိုတင်တားဆီးခဲ့၍ သာသနာ အနှစ်(၁၀၀၀)တည်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အနှစ်(၁၀၀၀)ဆိုသည်မှာ အရည် အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ အနှစ်(၁၀၀၀) ဆိုလိုသည်၊ တဖြည်းဖြည်းယုတ်လျော့လာသော အနှစ် (၄၀၀၀)ထည့်ပေါင်းလျင်အနှစ်(၅၀၀၀)ဟု မှတ်သား နိုင်သည်။ သာသနာတည်ခြင်း၊ မတည်ခြင်းမှာ သာသနာတော်ကို ကြည်ညို ကိုးကွယ်သူတို့နှင့်သာ
သက်ဆိုင် သည်၊ မျက်မြင်ပင် ဘုရားပွင့်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပြည့်စုံတဲ့ သာသနာ ရှိသေးရဲ့လား။
အမေး(၁၀) မောင်သူရ (thura.civil8@gmail.com)
အလှူဒါနပြုကြရာတွင် မည်သို့ပြုသည်ဖြစ်ပါမှ လက်ရှိဘဝတွင်ပါ မျက်မှောက် လက်ငင်း ခံစားရခြင်းသည်
ဖြစ်ပါမည်လဲ အရှင်ဘုရား။ များသောအားဖြင့်တပည့်တော်တို့ သိမှတ်ရသည်မှာ နောက်နောက်
ဘဝများမှသာလျှင် ခံစားရသည်ဟုသာ ကြားနာမိပါသည်။အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသော ဥပါသကာတို့တွင် ပို၍ပင် အကျိုးပေးသင့်သည်မဟုတ်ပါလားဘုရား။မေတ္တာရှေ့ထားဖြေကြားတော်မူပါဘုရား။
မည်သည့်ကောင်းမှုပဲဖြစ်စေ လက်ရှိဘ၀၌ အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စေတနာပါရှိသလို နောက်ဘ၀များတွင်မှ အကျိုးပေးမည့်
စေတနာများလည်းပါရှိသည်။ အလှူဒါနပြုကြရာတွင် စေတနာမှန်ကန်ဖို့လိုပါသည်။ မလှူမီ၊ လှူဆဲ၊ လှူပြီးနောက်
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါမည်။ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိစေရပါ။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် အကျိုးပေးမှုသည်
ကိုယ်ကျိုးအတွက် မငဲ့ကွက်သော ပါရမီဒါနမျိုးကပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေပါသည်။
အမေး(၉) Zaw Naing Aung(1biotechnique@gmail.com)
ရိုသေလေးစားရပါသော အရှင်ဘုရား ရဟန်းတာ အရှင်မြတ်တို့ မှာ အာပတ်သင့် တတ်ပါသေးသလား ဘုရား
(၉) Zaw Naing Aung ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့် သင့်တာမဟုတ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓပညတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်
သင့်နိုင်သော ပဏ္ဏတ္တိ၀ဇ္ဇသိက္ခာပုဒ်များကို ချိုးဖော်မိလျှင် ရဟန္တာပင်ဖြစ်စေ အာပတ်သင့်နိုင်သည်။
အမေး(၈) ညီညီ (nyinyilay2008@gmail.com)
မေတ္တာရှေးထား၍ တပည့်တော် ကို မေတ္တာပွားနည်း စနစ်အမှန်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါရန် လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား..
အမေး(၇) River Mountain (khaing.jasmin@gmail.com)
Bhante,I pay homage to you, and may I know the right concentration of the Noble Eightfold Path, as exactly as possible, which Our Buddha really means.
And one knows and sees the hardness, hotness, flowing,etc. of the whole body without knowing and seeing the hardness, hotness, flowing, etc. of the smallest particle. Thus, can one say that he/she knows and sees the ultimate materiality?
paying homage to you,
(၇) River Mountain ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
Yes, the Buddha explains the Right Concentration in the Eightfold Noble Path as the concentrations in the4Thoketa Stages, inalot of Sultas.But it should be understood as the concentration as the highest level. For those who donot follow the Samatha technique how to attain suchaconcentration?
By removing the name of concept just the nature of material quality is the ultimate reality.
အမေး(၆) ကိုထက် (hlataw.thar49@gmail.com)
တပည့်တော် ပါလိ(parli)ဘာသာ ကိုလေ့လာချင်ပါတယ်ဘုရား
ဘယ်ကဘယ်လိုစလေ့လာ၇မလဲ ဘယ်သင်တန်းတွေတက်ရမလဲ ဘယ်စာအုပ်တွေလေ့လာရမလဲဆိုတာမိန့်တော်မူပါဘုရား သင်တန်းမတက်ဘဲကော လေ့လာလို့ရလားဘုရား
ဘုန်းဘုန်းတို့စားမေးပွဲ အငယ်တန်းတို့ ဘာတို့ ၀င်ဖြေလိုကောရလားဘုရား ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
ဆရာတော်ဘုရား သာသနာ့ အကျိုး ဆထက်တပိုး ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ ဘုရား...
ပါဠိဘာသာသင်တန်းက များများစားစား ရှိမယ်မထင်ဘူး၊ မဟာဂန္ဓာရုံအရှင် ဇနကာဘိဝံသ၏ ပါဠိသိက္ခာစာအုပ်က
စပြီးလေ့လာကြည်ပါ။ သင်တန်းမတက်ဘဲလေ့လာ့လို့ရပေမဲ့အခက်အခဲတွေ့ကြုံနိုင်တယ်၊ အနီးကပ် သင်ပေးမဲ့
ဆရာရှိရင် ပိုကောင်းမယ်၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲကနေ ဓမ္မာစရိယ အထိသင်နိုင်ပါတယ်၊ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
အမေး(၅) usunanda (ashinsunanda30@gmail.com)
ဘုရားတပည့်တော့်သည် ပညာသင်ဆဲ ရဟန်းငယ်တပါးပါဘုရား ဘုရားတပည့်သိချင်သောအရာသည်။ ဓါတ်တဆယ့်ရှစ်ပါးရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပါဠိ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းပြပေးတော်မူစေချင်ပါသည်ဘုရား..ဆရာတတော်ဘုရား မအားလပ်၍ အချိန်မပေးနိုင်ပါကလဲ ဘုရားတပည့်တော်အား ပါဠိ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာနှင့် ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သော ကျမ်းစာအုပ်များအား လမ်းညွန်ပေးသနားမူပါရန် ဘုရားတပည့်တော် ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျောက်ထားတောင်းပန်ပါသည်ဘုရား...ဆရာဘုရားကြီး ကျမ္မာလျက်သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။ ။ ဦးတင်လျုက်ပါဘုရား
(၅) usunanda ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
၀ိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာကို အင်္ဂင်္င်္င်္င်္လိပ်လိုပြန်ထားသော The Path of Purification စာအုပ်နှင့် The Path of Purity စာအုပ်များမှ Chapter -15 မှာပါရှိတဲ့ ဓာတုဝိတ္ထာရကထာကိုဖတ်ကြည့်ပါ၊ ပါဠိကို ၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ
ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ-၁၁၅ မှာကြည့်ပါ၊ အင်္ဂင်္င်္င်္င်္လိပ်ဘာသာပြန်ကိုဖော်ပြပါစာအုပ်နှစ်အုပ်မှယူပါ၊ ဓာတ်(၁၈)ပါး ၏ သဘာဝကိုသိနိုင်ပါသည်။ကြိုးစားပါအရှင်။
အမေး (၄) မောင်နောက်တိုး၏ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း
အနတ္တသဘောအရ လူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစိုးမရဘူးဆိုရင် ကုသိုလ်ကိုပြုရန် အကုသိုလ်ကိုမပြုရန် လုံ့လဥဿဟကို ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါတော့မလဲ။ တပည့်တော်အနေနဲ့ လူဟာ မိမိကိုယ်ကို
အများအားဖြင့် အစိုးမရသော်လည်း အနည်းငယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်တော့ အစိုးရနေတယ်လို့ ထင်မြင်နေမိပါတယ်ဘုရား။ မိမိကိုယ်မိမိ မအိုမနာမသေအောင် အာဏာမထားနိုင်သော်လည်း
ကြွရန်လှမ်းရန်ချရန် လက်မြှောက်လက်ချရန် စသည်တို့မှာတော့ အာဏာထားနိုင်တယ်လို့ ထင်နေမိပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်ရဲ့ သံသယကို သနားသဖြင့် ပယ်ဖျောက်ပေးပါရန် လျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဘုရား။
အနတ္တဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်ပျက်မှုနှင့် အစဉ်ပြောင်း နေတဲ့သဘောကိုပြောတာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကို ဖတ်ကြည့်၊ လူတွေ အပေါ်ယံကိစ္စ ပြောင်းလွဲ လုပ်ကိုင်နိုင် သော်လည်း အို၊နာ၊သေ သဘောကို မချုပ်ကိုင်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါအနတ္တပေါ့၊ အကြောင်းတရား ညီညွတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေသည်ကို ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရ ဖြစ်ပေါ်သည်ဟုထင်တာပါ၊ အကြောင်းတစ်ခုခု ချို့ယွင်းပျက်စီးသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် ဘာမှလုပ်မရဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတယ်၊ လေဖြတ်ခံထားရသူကိုပဲကြည့်ပေါ့၊ တကယ်တော့ ကိုယ်ဖြစ် ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေရှိလို့ဖြစ်တာပါ၊ အရက် အကျန်အကြွင်းလေးကို သောက်ပြီး မူးယစ်နေတဲ့ နောက်ချေးပိုးထိုးတစ်ကောင်ဟာ နွားချေးပုံ အစိုပေါ်တက် လိုက်တဲ့အခါမှာ ငါ့ကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန် ကြောင့် နွားချေးပုံကြီးအိသွားတယ်လို့ အထင်ရောက်ဘူးတယ်၊မူးမူးရူးရူးနဲ့သူ့ကိုယ်သူ အထင်ကြီးပြီး အနားက ဖြတ်သွားတဲ့ တောဆင်ရိုင်းကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်၊ ဆင်ကြီးက နွားချေးပိုးကောင်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို သူ့အပေါ် မစင် စွန့်ချခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်။(ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်နိပါတ်ကိုကြည့်)၊ဂူထပါဏဇာတ် (ဇာတ်နံပါတ်-၂၂၇)။
အမေး(၃) တပည့်တော်စိုးမင်းနိုင် (soeminnaing@gmail.com)
မြင့်မိုရ်တောင် ဘယ်မှာ ရှိလဲ ဘုရား..တစ်ယူဇနာက ဘယ်လောက် ရှိလဲ၊ကမ္ဘာကနေ နေဆီအကွာအဝေး လဆီအကွာအဝေး က တစ်ခါက တပည့်တော်တွက်ကြည့်တာမကိုက်ဘူး ဘုရား! ဘုရားကိုတော့ ယုံတယ် ဘုရား မှတ်တမ်းတွေကများ လွဲလို့လား ဘုရား. Mm နှင့် mm လို ဘုရား...
မြင့်မိုရ်တောင်ဘယ်နားရှိလဲဆိုတာကို…ကိုယ်တိုင်သိချင်နေတာကြာပြီ၊ တကယ်တော့ လူသားတွေ ကိုယ်တိုင်မြင့်မိုရ်တောင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟုသတိပြုသင့်သည်။စာပေကျမ်းဂန်၌ မြင့်မိုရ် တောင်ထိပ်၌ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိသည်။အောက်ခြေ၌ အသူရာပြည်ရှိသည်။ အလယ်တွင် ကျွန်းကြီး လေးကျွန်းပါဝင်သော လူ့ဘုံရှိသည်။ကမ္ဘာလုံးကြီးကိုကြည့် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းထိပ်သည် မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်၊ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအခြေသည် အသူရာနတ်ပြည်၊ အလယ်မှာလေးကျွန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူ့ဘုံရှိသည်။ ဤသို့ပင်ထင်မြင်ယူဆပါသည်။ ယူဇနာဆိုသည်မှာ (Measurement) တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာ ဆိုသည်မှာကွာခြားနိုင်သည်။ အနေအထား ဆိုသည်မှာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ပဲခူးမြို့တည်ရာမြေသည် ရှေးယခင်ကရေအောက်တွင်ရှိပြီး ဟင်္သင်္င်္င်္ာ ငှက် (၁)‌ကောင်နားယုံသာ ကုန်းပေါ်သည်ဟုဆိုသည်။ အဲ့ဒါကို ယခုလူတွေ ယုံနိုင်ပါ့မလား၊ တကယ်တော့ ပြောင်းလဲမှုနိယာမ၏ ဖြစ်စဉ်မျှသာဖြစ်သည်။ မနေ့က အခြေအနေနှင့် ယနေ့ မတူဘူးဆိုတာ ထင်ရှား၏။ ပြောင်းလဲမှု၏ သဘာဝအတိုင်းမှတ်ရမည်သာ ဖြစ်သည်။ငြင်းဆိုဖွယ်မရှိ။
အမေး (၁) ကိုတင်မောင်လတ် (Tinmaunglatt.latt@gmail.com)
အမေး (၁) tinmaunglatt (Tinmaunglatt.latt@gmail.com) ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ လိုတိုရှင်းလျှောက်ထားရပါလျှင်- လူအဖြစ် ဘ၀ ရရန် ခက်ခဲသည့် အကြောင်း မှတ်သား ရပါသည်။ သို့ ရာတွင် လူများ ယခုအခါ တိုးပွားသထက် တိုးလာပါသည်။ဇနီး မောင်နှံ ၂ ဦး ရှိလျှင် (ယခု သားဆက်ခြား စီမံကိန်း မရှိလျှင်) ၂ ဆ မက တိုးနိုင် ပါသည်။ဖယောင်းတိုင် ၁ တိုင်မှ များစွာ ထွန်းညှိနိုင် ပါသည်။တဖန် တွေ့ ရှိချက်များ အရ စင်္ကြာဝဠာ သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် များအရ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လူသည် လည်း ထိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အရ ပြောင်းလဲလာရခြင်း ရလာဒ် ဟုသိနားလည်ပါသည်။စင်္ကြာဝဠာ သည်လည်း တချိန်တွင် ချုပ်ငြိမ်း မည်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အားလုံး zero sum ဖြစ်ပါမည်။ အခြားအခြားသော ဘ၀ များဆို သည့် meaning ကို နားမလည်တော့ပါဘုရား။တပည့်တော် Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သုံးပါးကို ယုံ ကြည်ပါသည်။
လိုတိုရှင်းလျှောက်ထားရပါလျှင်- လူအဖြစ် ဘ၀ ရရန် ခက်ခဲသည့် အကြောင်း မှတ်သား ရပါသည်။ သို့ ရာတွင် လူများ ယခုအခါ တိုးပွားသထက် တိုးလာပါသည်။ဇနီး မောင်နှံ ၂ ဦး ရှိလျှင် (ယခု သားဆက်ခြား စီမံကိန်း မရှိလျှင်) ၂ ဆ မက တိုးနိုင် ပါသည်။ဖယောင်းတိုင် ၁ တိုင်မှ များစွာ ထွန်းညှိနိုင် ပါသည်။တဖန် တွေ့ ရှိချက်များ အရ စင်္ကြာဝဠာ သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် များအရ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လူသည် လည်း ထိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အရ ပြောင်းလဲလာရခြင်း ရလာဒ် ဟုသိနားလည်ပါသည်။စင်္ကြာဝဠာ သည်လည်း တချိန်တွင် ချုပ်ငြိမ်း မည်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အားလုံး zero sum ဖြစ်ပါမည်။ အခြားအခြားသော ဘ၀ များဆို သည့် meaning ကို နားမလည်တော့ပါဘုရား။တပည့်တော် Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သုံးပါးကို ယုံ ကြည်ပါသည်။
လူဘ၀ရခဲသည်မှာမှန်ပါသည်။ယနေ့ခေတ်လူဦးရေတိုးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး၏ တိုးပွားနှုန်းနှင့် အရေအတွက်ကိုမမှီပါ။တိရစ္ဆာန်အားလုံး၏ တိုးပွားနှုန်းနှင့် ဆိုပါက အဘယ် ပြောဖွယ်ရာရှိ အံ့နည်း။ယခုခေတ်လို (Family Plan)ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသည်ပင် လူ့အဖြစ်ရခဲမှုသည်ပို၍ပေါ်လွင် နေပါသည်။ စင်္ကြာဝဠာမှာ ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ရှိသော်လည်း သတ္တ၀ါတို့ အနိမ့်အမြင့် ပြောင်းလဲမှုမှာ ကံနဲ့သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု မြတ်စွာဘုရားကဟောပါသည်။ ဒါဝင်၏သီအိုရီက ယုတ္တိမရှိပါ။
Dhamma Class (English) (IDE)
ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ၀ိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ ဘာသာရပ်
လောကသားတို့ အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက်
၂၀၁၃ခုနှစ် (၁၀)ရက်တာ ရက်တို အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရားများ (အခြေခံအဘိဓမ္မာသင်တန်း)
၂၀၁၃ခုနှစ် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်အနှစ်ချုပ် ဓမ္မပညာသင်တန်း တရားတော်များ